Idimoni Slayer: I-Anime ETHUNYISWE KAKHULU KA-2019 - Ingabe Kuyifanele? - Okunye
Idimoni Slayer Ingabe I-Anime ETHUNYISWE KAKHULU KA-2019, Kepha Ingabe Kuyakufanele? (Buyekeza)
Idimoni Slayer yi-anime EHYPED kunazo zonke engiyazi kulo nyaka. Ungabonga usuku lokukhishwa lalokho.
Uma ikhishwe ngenkathi kukhishwa i-My Hero Academia isizini 4, nginesiqiniseko sokuthi ngabe sizoba nengxoxo ehlukile manje.
Kepha noma iyiphi indlela - wonke umuntu ufunga kimi ukuthi MKHULU we-anime Demon Slayer onjani. Ngakho-ke bekufanele ngiyibuke.
Nazi izinto engizozibuyekeza:
Ngalokho kusho - ake sifike kukho!
Ukubuyekezwa kwe-Demon Slayer Anime:
1. Ake siqale ngokubukwayo
I-Demon Slayer ikhiqizwa yi-Ufotable. Isitudiyo esifanayo ngemuva sikhombisa njenge:
Fate Hlala Ebusuku.
Futhi i- Ukudalelwa i-franchise ngokujwayelekile. I-Ufotable yenza i-anime enhle futhi abalandeli abambalwa be-anime abangavumelani nalokho.
Idimoni Slayer ubufakazi balokhu futhi nge ukubukwa okumangazayo, izithombe, abalingiswa nokunaka imininingwane. Akunandaba ukuthi YINI isiqephu noma ukuthi kwenzekani ngaphakathi kwesigcawu esithile.
Amalangabi akulesi sigcawu awenzi ubulungiswa bekhwalithi. Wena unayo ukuyibuka ukuze uzibonele yona.
Futhi lapha - ngisho nezimagqabhagqabha 'zokungcola', ukopha namamaki ejazi likaTanjiro kubukeka kunengqondo futhi kuphuzu.
Uma ngabe le anime ibilinganiselwe kuphela kokubonwayo kwayo, ababaningi abancintisana nabo abangahle bathole ithuba eringini noDemon Slayer.
Isikweletu lapho kufanele khona isikweletu.
2. Izinhlamvu eziyinhloko nezokusekela
nezuko kanye tanjiro izikhathi ezimnandi
Abalingiswa ababili abaphambili nguNezuko, udadewabo omncane ka Ipuleti.
UNezuko ’uphenduke idimoni ngemuva kokuba umndeni wakhe ubulewe ngamademoni. Futhi yena ifa igazi elithile lamademoni uqobo, liphenduka idemoni.
Amandla ukuphela kwento ebalulekile emhlabeni
UTanjiro akanakho, futhi unikela impilo yakhe ekuvikeleni uNezuko. nanjengombulali wedemoni uqobo. Ngenhloso eyodwa yokuthola ikhambi lokuguqula uNezuko abe 'ngumuntu'.
yindaba ebabayo-emnandi phakathi kwezelamani, futhi ngicabanga ukuthi i-anime yenza umsebenzi omuhle WOKWABELANA nokukhombisa isibopho abanaso komunye nomunye.
Ngemuva kwakho konke - bobabili ukuphela komndeni abanayo. Futhi yabo kuyinqaba ubudlelwano benza iDemon Slayer ikhanye ngezindlela ezinye iShounen ungenzi.
Futhi-ke kukhona abalingiswa abanjengoTomioka noShinobu.
Tomioka kukhona kusukela ekuqaleni, futhi uyisizathu sokuthi indaba yeDemon Slayers ithathe indlela eyenzayo.
Ukhombisa umusa ngemuva kokubona izimo ezingajwayelekile ezakhele uTanjiro noNezuko. Ukuba ngabaphathi bezinkemba abazolile futhi okungaziwa kangako ngaye, ubuntu bakhe 'bokuziqhenya' kumenza abe nelukuluku lokufuna ukusekela.
UShinobu unezici zobuntu ezifanayo, kodwa umnene ngokwengeziwe, unamahlaya futhi ngijabule ebusweni. Kodwa kukhona okuthile okumnyama ngaphansi kobuso futhi jikelele uyilungele kahle le ndaba.
UZenitsu ngakolunye uhlangothi kuyacasula njengoba F. He is the okubi kakhulu ingxenye yeDemon Slayer futhi ngeke ngimangale uma abalandeli BAYEKA i-anime ngenxa yalo mfana.
Uyisibonelo se amahlaya amabi athatha kakhulu. Futhi ukungaguquguquki kwakhe njalo kwenza kube kubi kakhulu.
Angikaze ngibone i- ingane uhlamvu lukhononda ngalokhu.
Futhi Inosuke, njengesiphukuphuku njengasekuqaleni, unokuthuthuka okuthakazelisayo ochungechungeni lwe-anime.
'Uthobekile' ngokuhlangenwe nakho kwakhe futhi ushintsha kakhulu. Ukuntuleka kwakhe kokusebenzisa ingqondo kubangelwa ukuthi ukhulele ehlathini futhi akakaze abe nomndeni noma ikhaya. Noma funda kusuka.
Yilokho okushiwo yindaba noma kunjalo.
3. Izigcawu zesenzo
Kuningi mina inzondo UZenitsu njengomlingiswa, lapho eba namandla? Izigcawu zakhe zezenzo ezinye zezinto ezinhle kakhulu zeDemon Slayer.
Ngempela kukwenza ucabange ukuthi 'kungani iZenitsu ingahlali inje' kepha ungakuphikisa lokho ukuba namaphutha yingakho lezi zikhathi zibongwa kangaka.
Yize ngingacabangi ukuthi kuyizaba ezinhle mathupha.
Isiqephu 10 ngesinye isenzo sesenzo okufanele sikhonjiswe. Yilokho engikubiza ngokuthi 'yiDemon soccer' ngenxa yendlela uNezuko akhahlela ngayo ibhola emuva naphambili.
demon slayer isiqephu 10 nezuko battle 9
idemoni umbulali isiqephu 10 nezuko empini 7
demon slayer isiqephu 10 nezuko battle 11
demon slayer episode 10 nezuko battle 14
demon slayer episode 10 nezuko battle 3
demon slayer episode 10 nezuko battle 4
demon slayer episode 10 nezuko battle 12
demon slayer episode 10 nezuko battle 18
idemoni umbulali isiqephu 10 nezuko empini 17
demon slayer episode 10 nezuko battle 2
LE mpi kuze kube manje kungenye yezintandokazi zami. UNezuko uqhumisa ibhola emuva naphambili ngamandla anele ngokoqobo ukuklebhula ikhanda lomuntu kwakushubile.
Futhi isiqephu se-19, wonke umuntu asibiza ngokuthi “isiqephu esihle kakhulu” sibukeka simangalisa futhi sinezikhathi zokuqina naso.
Ngeke ngithi kuhle njengokusho kwe-hype, kodwa kunjalo isiqephu esivelele ochungechungeni lweDemon Slayer. Kimi kungikhuthazile ukuqeda i-anime.
Udlame ezindaweni eziningi ukugqamisa okukodwa engizokubalula. I-IMPACT ithumela ukuqhaqhazela kufayela le- ngqo umzuzwana uyenzeka.
Cishe zonke lezi zikhathi 'zokuchobozwa komphefumulo' zizizwa zinamandla futhi zichitha. Futhi ama-engeli ekhamera abonakala.
Okuhlobene: 26 Kochungechunge olumnyama kakhulu lwama-Anime
4. Isakhiwo nendaba
ukopha kwepuleti 1
tanjiro washaqeka nezuko
Into engizondayo ngayo Hype ingabe ngokweqile. Kulokhu - Indaba yamademoni uSlayer 'uhloniphekile'.
Okumangazayo ukuthi kushaya ibhalansi enhle yokungazizwa 'uphuthume kakhulu', ikakhulukazi ekuqaleni lapho uTanjiro esuka kokuhlangenwe nakho 'okubuhlungu' kuya ngokuzumayo ukuba yi-BOSS eya ekhanda ngamademoni.
Izizwa iphuthuma, kepha ngasikhathi sinye izwa ukuthi 'ilungile'. Ngiyinikeza udumo ngalokho ngoba akuyona into engiyibonile ngaphambili.
Isici somlingiswa oyinhloko ohamba nedimoni, wazi ukuthi kunjani isimanga endaweni yonke yeDemon Slayer, yilokho kuyangithakazelisa.
Ngicabanga ukuthi yilokhu okwenza icebo 'lihluke', noma ngabe linamaphutha alo.
Iphutha elilodwa okufanele likukhombise ukuhlukunyezwa kokubuyela emuva, ikakhulukazi kusiqephu se-19.
ama-animes afana nesithandwa ku-franxx
Kucishe kube sengathi izama ukuba yi- cliche Shounen. Futhi kwezinye izici kwaqala ukuzizwa njengeFairy Tail.
ukubuyela emuva kwamademoni
kagura dance demon slayer isiqephu 19
Ngemuva kwakho konke - sonke siyazi empeleni, iTanjiro akakaze ame ethubeni lokusinda. Kuze kube maphakathi nokuhlaselwa kwakhe lapho ethola 'ama-flashbacks wemizuzu emi-2-5' asindisa usuku. Ukwenza isipiliyoni ngokomzwelo nakakhulu njengoba uyibuka ivuleka.
Kepha ngikahle ngalokho. Lokho kuyingxenye yephuzu. Kepha ngicabanga nje ukuthi kunamaphutha amaningi esiqeshini se-19 kunabalandeli abaningi abazokuvuma.
Ngaphambi ukubuka i-anime kubonakala sengathi iDemon Slayer konke ubuhle nokujula kwe-zero noma ikhwalithi. Kepha iqala ukucosha futhi igcina ngokuba okuningi kube ngcono ekugcineni.
I-Demon Slayer iyi-anime ENHLE, kepha hhayi i- umsebenzi wobuciko
Uma kunjalo okusha ku-anime njengabantu abaningi abayibukayo, yebo, uzokujabulela. Lokhu kuyiqiniso noma ngabe ungumakadebona we-anime obuke imibukiso engu-100 nengu-100.
Futhi noma ngingathanda ukubona isizini yesibili, i- 'hype' ezungeze le anime ayihambelani nekhwalithi, kuya ngokuthi ugxila kuphi.
Iqoqo Lamademoni Slayer Quotes Okufanele Ukwabelana!
Iqiniso Ngemuva Kokuthi Abalingiswa Bama-Anime Bangabheki IsiJapane
Abalandeli be-Dragon Ball Z abangama-22 + Bazokuthokozela
Imibukiso ye-Anime Eyinqaba Kodwa Ephumelelayo Ezokugqugquzela Ukufunda Kanzima
60+ Of The Greatest RWBY Quotes Fans Akufanele Uphuthe!
I-23 kuphela ye-Angel Beats Quotes Okudingeka Uyibone Njenge-Anime Fan
UNkulunkulu Ohamba Phambili Wokuthengiselana Kwasesikolweni Esiphezulu Ohlwini Lwakho Lohlu
Izilinganiso Ezikhumbuleka Kakhulu Ezivela Esangweni Lama-Steins Ezizokwenza Ucabange
Ama-27 + ama-Greatest Yuri On Izilinganiso ze-Ice Zabalandeli be-Yaoi
Izilinganiso ezingama-11 + Abakhulu Bokubulala Abaziqhenyayo Zama-Anime Fans
Uhlu Lokugcina lwamawebhusayithi e-Anime Okufanele Uqale Ukulandela
29+ Of The Best Akira Toriyama Izilinganiso DBZ Fans
ingcezu yamahlaya engcono kakhulu yempilo anime
10 i-anime ehamba phambili ngaso sonke isikhathi
i-anime ikhombisa ukubuka ngesiNgisi ebizwa
imibukiso engu-10 ephezulu yesikhathi sonke